Samsung Galaxy S10 Plus သည် Exynos 9820 နှင့်အတူ AnTuTu ကိုဖြတ်သန်းသည် Androidsis
လအနည်းငယ်အတွင်း Samsung သည် Galaxy S series များတွင်ဖုန်းအသစ်များမိတ်ဆက်ပေးမည်။ က Galaxy S10 Plus အား သူတို့ထဲကတ ဦး တည်း, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတ ဦး တည်းထစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တစ်မူကွဲဖြစ်လိမ့်မည် က Galaxy S10 5G။ အခုတော့သူမဖြန့်ချိမီ AnTuTu ကိုဖြတ်သန်းသွားသည် လာမည့်နှစ်တွင်စွမ်းအားအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်အသစ်ကပင်ပို။ ပင် အိမ်ထောင်ဖက် 20.
များစွာသောကောလာဟလများကိုဆက်ခံသူများကပြောကြားခဲ့သည် က galaxy S9 သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် Snapdragon 8150 အတွင်းပိုင်း။ သို့သော်၏တင်ဆက်မှုအပြီး Exynos 9820တောင်ကိုရီးယား၏သမိုင်းကြောင်းအရထုတ်ကုန်များအပြင်အောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့် AnTuTu ၏ရလဒ်များအားဖြင့် ထုတ်ကုန်များတွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အသစ် chipset ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အခြားဗားရှင်းများတွင် Qualcomm ၏ SD8150 ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။
Galaxy S10 Plus ၏မော်ဒယ်နံပါတ်ကို 'SM-G975F' အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းသည်မကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သော Exynos 9820 နှင့် Mali-G76 GPU တို့၏စွမ်းအားကိုပြသည်။ ၎င်းတွင် RAM6GB နှင့်သိုလှောင်မှု 128 GB ရှိသည်။ ရှင်းနေသည်မှာ, ဒီကျိန်းသေပစ်လွှတ်မှာတစ်ခုတည်းသော configuration ကိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
AnTuTu ကပြောပါတယ် Galaxy S10 Plus တွင် ၂,၂၈၀ x ၁၀၈၀ ပစ်ဇယ်လ်ရှိသော FullHD + မျက်နှာပြင် resolution ရှိသည်19 အချိုး:9မှဘာသာပြန်ပေးသော။ ဖုန်းလည်းအလုပ်လုပ်တယ် အန်းဒရွိုက်9Pie အဲဒါကိုအောက်မှာစိတ်ကြိုက်လာလိမ့်မယ်ပေမယ့်တစ် ဦး operating system အဖြစ် တဦးတည်း IU သည်.
ရလဒ်များ၏ကွမ်တမ်, ဒီစမ်းသပ်မှုမှာဖုန်းက ၃၂၅၀၇၆ မှတ်ရတယ်။ အဘယ်အရာကိုသင်အထက်ထည့်လေ့မရှိ ဈေးကွက်ထဲမှာအင်အားအကြီးဆုံး Android စမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု။ သို့သော်ရမှတ်ဝေးနေဆဲဖြစ်သည် Snapdragon 8150 စမ်းသပ်ကိရိယာသည်လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်းများစွာကပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Samsung ၏ Galaxy S10 စီးရီးသည် 5G ကွန်ယက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးထားသောမော်ဒယ်အပါအဝင်အနည်းဆုံးမော်ဒယ်သုံးမျိုးပါရှိလိမ့်မည်။ 12 GB အထိသိုလှောင်နိုင်သည့်ပမာဏနှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 1 TB ရှိလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကသင်ပြောခဲ့သောနောက်ဆုံးပေါ်ယိုစိမ့်မှုများအရ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung Galaxy S10 Plus သည် Exynos 9820 နှင့်အတူ AnTuTu ကိုဖြတ်သန်းသည်